प्रचण्ड पुत्री रेणु दाहालमाथि अख्तियारले लियो एक्सन ! - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
प्रचण्ड पुत्री रेणु दाहालमाथि अख्तियारले लियो एक्सन !
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड पुत्री रेणु दाहाललाई झट्का लागेको छ । उनको मातहतमा रहेको अस्पतालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छापा मारेको हो । भरतपुर महानगरपालिका मातहतमा रहेको भरतपुर अस्पतालमा अख्तियारले छापामारेको हो । दाहात महानगरपालिकाकी मेयर हुन् ।
अस्पतालले सञ्चालन गरेको फार्मेसीमा अनियमितताको उजुरी परेपछि अख्तियारको टोलीले छापामारी गरेको हो । अस्पतालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय हेटौंडाबाट उपसचिव विष्णु प्रसाद सापकोटासहित ५ जनाको टोली पुगेको छ ।
टेन्डर सहभागी नै नभएको फर्मबाट औषधि खरिद गरेको, फार्मेसीका तर्फकालाई नदिएर सिएमएलाई प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको, न्युनतम औषधि समेत उपलब्ध नगराएको लगायतको उजुरी परेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग स्रोतले जनाएको छ । अयोगको हेटौंडा स्थित कार्यालयका प्रवक्ता समेत रहेका सापकोटाले अनुसन्धानका लागि आवश्यक कागजात नियन्त्रणमा लिने काम भइरहेको बताए । अनलाईन मार्ग बाट